Mpanamboatra marika mpamatsy boaty tsy miova - Orinasa masiaka marika manamboatra boaty China
Ny masinina ho an'ny boaty fanomezana, boaty fonosana, boaty vita tanana vita amin'ny famokarana tsipika fanangonana, ny fanary dia mahatsapa ny famolavolana mivalona, ​​ny sofina mivalona, ​​ny fanesorana ny bubble ary ny famolavolana ary ny fametahana sy ny fitohizan'ny asa, dia afaka mamonjy fotoana sy artifisialy, manatsara ny famokarana. ny vokatra dia ny famokarana ny vokatry ny safidy ho an'ny famokarana boaty fonosana ho an'ny orinasa.
Masinina fanamoriana zorony mandeha ho azy
Ny masinina dia ampiasaina amin'ny lafiny efatra ho an'ny fametrahana zorony automatique. Izy io dia ampiharina indrindra amin'ny boaty finday, boaty fanomezana, boaty firavaka, boaty akanjo, boaty kiraro, boaty fanatsarana tarehy ary boaty hafa. Ny rafitra servo feno sy ny interface misy ny masinin'olombelona dia mamaritra ny marina, ny haavony, ny fametrahana ary ny fiasan'ny endrika noforonin'olombelona.
N-650A (850A) Masinina fampidiran-drivotra aolomatika miaraka amina fiasan'ny taratasy famahanana mandeha ho azy sy ny fametahana azy, miaraka amn'ny fametahana mari-pana mandeha ho azy sy ny limer 24 ora.
Masinina famonosana boaty henjana
238 andian-dahatsoratra boribory mandeha ho azy dia ny fampivoarana voalohany sy ny famokarana fitaovana fanamboarana boaty erak'izao tontolo izao, ho an'ny taranaka faharoa, ny hetsiky ny masinina manontolo ary ny fanatsarana ny endrika ivelany, ny karazana boaty habe dia azo ampiharina amin'ny sakany midadasika kokoa.